2 gabdhood oo madaxa isaga dhigay oo la xaqiijiyey inay wadaagan araga &..+Sawiro – SBC
2 gabdhood oo madaxa isaga dhigay oo la xaqiijiyey inay wadaagan araga &..+Sawiro
Gabdhaha mataanaha ee madaxa isaga dhegan ee lagu kala magacaabo Taitiana & Krista ayaa la xaqiijiyey in ay adag tahay in lakala saaro oo qaliin lagu sameeyo jirkooda.
Gabdhahan oo haatan afar sano jir ah ayaa dhakhaatiirta la socota ee ku sameeyey baaritaanka dhanka maskaxda waxay cadeeyeen in labadan gabdhood ay wadaagaan maskaxda. Dhakhaatiirtu waxay rumaysan yihiin in labadan gabdhood ay wadaagan qaybo ka mid ah maskaxda gaar ahaan qaybta loo yaqaan thalamus taasi oo dareen ku celinaysa qaybaha kale ee jirka ayna dhici karto in xitaa gabdhahan midba waxa ay arkayso ay tan kale arki karto.
Taitiana & Krista oo hooyadood ay ku ag hayso Lori & Reba Schappell
Hooyo Felicia Simms, oo ah hooyada gabdhahan madaxda isaga dhegan waxay sheegtey in mid ka mid ah gabdhaha hadii ay indhaha isku qabato tan kale wax ay arkayso in ay sheegi karto tan indhaha isku haysata. Waxay kaloo sheegtey in hadii mid ka mid ah ay si ba’an biyo isaga dherjiso in tan kale ay dareemayso.
Professor Todd Feinberg oo ka tirsan qaybta psychiatry & neurology ee Albert Einstein College of Medicine, ayaa u sheegay wargeyska Times hadalkan “Waxay u muuqanayaan inay yihiin laba qof, hadana waa isku hal qof”.
Xaalada labadan gabdhood ku dhasheen waxaa la sheegaa in la arko marka ay dhashaan mataano gaaraya 2.5 milyan.
Mataanihii caanka ahaa ee isku dheganaa waxay ahaayeen Lori & Reba Schappell, kuwaasi oo ku dhashay magaalada Pennsylvania ee dalka Mareykanka haatan waxay jiraan 49 sano, waxaana ay diideen in la kala gooyo taasi oo ay ka baqeen in midkood la badbaadin waayo, haatan Reba waxay doonaysaa inay heesto.
Lori & Reba Schappell oo haatan 50 sano jir ku dhaw
26 jir Miss Simms, markii loo sheegay in labadeeda gabdhood ee mataanaha ah madaxa ay isaga dhegan yihiin, wax wal wal ah kama aysan qaadin, waligeedna kama caajisin inay daryeesho oo ay isku hayso labadooda.
Dhakhtarkii ugu horeeyey ee xaalada labada gabdhood darsay wuxuu muujiyey suurtagalnimada in gabdhahan lakala saaro oo qaliin lagu sameeyo isagoo tashi la sameeynayey hooyadood iyo aabahood, laakiin Hogan & Simms waxay go’aansadeen inaanay ku deg degin halis ama khatar ku timaada labadood gabdhood, maadama loo sheegay in labada gabdhood ay wadaagan qaybo ka mid ah maskaxda.
Miss Simms oo ka sheekaynaysay sida ay isku wax u arkaan labadeeda gabdhood waxay tiri “Marka ay wada ciyaaraan, mid ka mid ah gabdhaha hadii ay isku daydo inay wax ag yaal gabdha kale ay laacdo ama soo qabsato, halkaasi oo aysan ka arkeyn toos ayey u soo qabsanaysaa wiixii”.
Waxyaabaha kale ee gabdhan mucjisada ah lagu arkay waxaa ka mid ah in hadii mid ka mid ah ay habaryartood kilileyso ama xadxanteysiiso iyadoo ciyaarsiinayso , tan kale waxay dareemaysaa qajilaad & xat xanto.
Hadii mid ay daawanayso telefishin, tan kale waxay bixinaysaa jawaab
Hadii hooyadood ay Tatiana horteeda ku qabato boombale, isla markaana indhaha ka qabato Krista iyadoo indhaha laga hayo ayay soo sheegaysaasi waxaasi waxa ay yihiin.
Hadii labada gabdhood mid kasta gacanta loo saaro waraaq, mid kasta waxay leedahay laba waraaqood ayn haystaa.
Arimaha & kuwa kale oo fara badan ayaa la xaqiijiyey in labadan gabdhood ay wadaagana taasi oo dhamaanteed ah awooda & mucjisada ALLE.